Burmese Community Development Collaboration (BCDC) – Page2– BCDC
14/04/2021 Author: BCDC Category: Community
ဩစတြေလျားနိုင်ငံတွင် မြန်မာ့အရေး ကြားနားမှုပြုလုပ် (အပိုင်း ၁)(၂၀၂၁ ဧပြီလ ၁၃ ရက်)။ ဩစတြေလျားနိုင်ငံရဲ့ အစိုးရရုံးဆိုက်ရာ ကင်ဘာရာမြို့ က ပါလီမန်လွတ်တော်မှာ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ကြားနာမှု တခုကို ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဩစတြေးလျားနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ရဲ့ပူးတွဲအမြဲတန်း ကော်မတီ ကနေ့ ဦးစီးကျင်းပတဲ့ ဒီကြားနာမှုမှာ ဩစတြေးလျားနိုင်ငံရှိ မြန်မာလူမျိုးစုရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း တက်ရောက် ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအ‌ခြေအနေများကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကြားနာမှုကို လက်ရှိ ဩစတြေလျားအစိုးရရဲ့အရာရှိများကို မေးမြန်းခြင်း၊ မြန်မာလူမျိုးစုကိုယ်စားလှယ်များကို မေးမြန်းခြင်းနဲ့ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်များကို မေးမြန်းခြင်းစသည်ဖြင့် အပိုင်းများခွဲပြီး ပြုလုပ်ခဲ့တာ…
27/03/2021 Author: BCDC Category: Community
Please do come and pray with us.
Covid Donation for Myanmar from Australia (2021 January).
15/12/2020 Author: BCDC Category: Community
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1522005671327023&id=100005528134676&sfnsn=mo U Maung Maung Myint (0437 470 464) U Win Min Swe (0423 616 425) Covid Donation update (1/1/2021)
31/10/2020 Author: BCDC Category: Community
AGM zoom meeting was held successfully on 31 October 2020.
Canberra Trip Sponsor by BCDC
23/09/2020 Author: BCDC Category: Community
Donation Update up to6May 2020. Myanmar Covid-19 donation update (6/5/2020)I am pleased to inform you that BCDC has raised donations amount $10,752 which is equivalent to 10,000,000 kyats and transferred to Myanmar. We will update again when we received appreciation letter from Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Central Control…
CERTIFICATE OF HONOUR & GRATITUDE The Burmese Community Development Collaboration (BCDC) T/A Metta Community Care Sydney (MCCS) – ABN 39 150 530 260 has been involved in supporting the Education & Health Sectors and involving IT base education inside Myanmar since 2018. The main thrust of the Aid provided involved…